किन छाडिन् प्रियंका चोपडाले भन्सालीको फिल्म ? – Etajakhabar
किन छाडिन् प्रियंका चोपडाले भन्सालीको फिल्म ?
काठमाडौं – अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले निर्देशक सञ्जयलीला भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘गुस्ताखिया’ छोडेकी छिन् । यो कुराको पुष्टि प्रियंकाकी आमा मधुले गरेकी हुन् । मधुले एउटा अनलाइनसँग कुरा गर्दै प्रियंकाले नचाहँदा–नचाहँदै पनि गुस्ताखिया छाड्नुपरेको बताएकी छिन् ।
भन्सालीको सो फिल्ममा प्रियंका प्रमुख अभिनेत्री मात्र नभई सहनिर्मात्री रहने खबर पनि आएको थियो । तर, प्रियंका आफैँले प्रान्तीय फिल्म निर्माण गरिरहेकी तथा हलिउडका फिल्ममा समेत व्यस्त भएकाले गुस्ताखियाका लागि सेड्युल मिलाउन नसकेको बताइएको छ । प्रियंका आफूले अभिनय गर्ने फिल्ममा सहनिर्माता हुन जरुरी नभएको समेत आमा मधुले बताएकी छिन् ।
‘भन्साली आफैँ फिल्म बनाउन सक्छन् । उनलाई सहायक निर्माताको आवश्यकता नै पर्दैन,’ मधुले भनेकी छिन्, ‘समयअभावका कारण प्रियंकाले फिल्म गर्न नसकेकी हो । सहनिर्माता बन्ने त पछिको कुरा हो ।’ पछिल्लो समय हलिउड फिल्मका लागि अमेरिकामा रहेकी प्रियंका केही दिनअघिदेखि मुम्बईमा छिन् । उनले केही बलिउड फिल्म साइन गर्ने बताइएको छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
लेखिका अमृता प्रितम र शायर शाहिर लुधियानवीको रिलेसनसिपको विषय रहेको गुस्ताखियामा प्रियंकाले अमृताको भूमिका निर्वाह गर्ने तय भएको थियो । तर, अब उक्त रोलमा को हुनेछ, त्यो भने तय भएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २१, २०७४ समय: ७:४०:२८